I-Matrix kunye ne-vCreative Yongeza ukuHamba kokuSebenza ngokudityaniswa eNtsha-Ukuboniswa kweendaba ze-NAB ngu-Broadcast Beat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA LULA.
ikhaya » iindaba » I-Matrix kunye ne-vCreative Yongeza amandla okuhamba komsebenzi ngokudibeneyo
I-Matrix kunye ne-vCreative Yongeza amandla okuhamba komsebenzi ngokudibeneyo
Matrix, iqonga lokuthengisa intengiso lehlabathi kuphela olwenzelwe imithombo yeendaba, namhlanje libhengeze ukugqitywa kokudityaniswa kwe-API entsha kunye VCreative's isoftware yokuhamba komsebenzi kwerediyo. Umdibaniso, okhoyo ngoku, ubonelela ngoqhakamshelwano oluphuculweyo phakathi kweqonga lokuthengisa intengiso kumajelo eendaba laseMatrix, iMonarch, kunye nesoftware yeVCreative, evumela abasebenzisi ukuba bandise amandla abo okuhamba ngokungxama. Ngenxa yoko, abasebenzisi banokusebenzisa ngokufanelekileyo amathuba emali engeniso, baphucule ukusebenza kakuhle, kwaye bafezekise i-ROI ekhulayo.
Ngamandla e-vCreative ekupheliseni iimpazamo ezixabisekileyo kunye nokwenza lula inkqubo kunye nokugxila kweMatrix Monarch ekuxhumeni imithombo yedatha kwi-ukuhamba komsebenzi, abasebenzisi baya kufumana ukubonakala okukhulu kwincwadi yabo yeshishini kunye nazo zonke iinkcukacha zokuyila kuyo nayiphi na iakhawunti. Umzekelo, abasebenzisi bayakubanakho ukulandelela ngaphandle kwemthungo kolwazi olunempembelelo olubandakanya imveliso, amabala abaleka emoyeni, amabala acwangciselwe ukuphelelwa kungekudala, nangaphezulu - konke ngokuthe ngqo kwiirekhodi ze-akhawunti. Unxibelelwano luya kuphakanyiswa ngokunika abathengisi beendaba kunye namalungu eqela lokudala amandla okuqhagamshela ngebhlog, ukugcina ixesha kunye nokwandisa imveliso.
"Siqhubekeka siphucula inkqubo yethu kunye nezisombululo zokuphucula amava abathengi bethu, kodwa sikwazi ukubabonelela ngokusebenza ngakumbi kunye ne-ROI," kwabelana uJinny Laderer, uMongameli we-VCreative. "Zombini iMatrix kunye ne-VCiveive izimisele ukunceda abathengi bethu kwaye ndinoyolo ukuba ngokubambisana sinokubazisela isisombululo esibonakalayo nesibonakaliswe njengeza kuzisa iziphumo."
Umdibaniso phakathi kweMatrix kunye nevCreative ngoku ukhoyo kwisiseko sabo somthengi. Zombini iinkampani ziya kubonisa kwiRadio Show ngoSeptemba 24-26, 2019 eDallas, TX, (Matrix, booth #2446 kwaye vreative, booth #141) apho abasebenzisi banokuthi banciphise ukudibanisa okutsha.
"Enye yezona zinto zibalulekileyo zethu esiye saqhubeka ukugxila kuzo kukuphucula amandla abathengi bethu wokuhlanganisa, ukufikelela, nokulawula ukwahlula imithombo yolwazi yedatha nomntu wokuqala kwisikrini esinye, ekusebenzeni kwabo," utshilo uMark Gorman, CEO. , Matrix. "Olu dibaniselwano lutsha kunye ne-vCreative luyenza loo nto, ukuvala unxibelelwano phakathi kwezixokelelwano zethu zibini kunye nokuvumela abasebenzisi ukuba bafikelele kulwazi kuzo zozibini iinkqubo."
Ngolunye ulwazi, qha ga mshelana [Imeyile ikhuselwe] or [Imeyile ikhuselwe].
I-vCreative yinkampani yesoftware ehamba phambili yesoftware enikezela ngaphezulu kwe-4,400 iirediyo kunye nezikhululo zikamabonwakude kunye neenkampani zosasazo ngezisombululo zesoftware ezikhawulezayo, ezithandekayo, ezinokuthenjwa, kunye neenkxaso yamathuba okwenza ingeniso. Imigca yemveliso edibeneyo ibandakanya: i-vPPO yokuvelisa kunye nokuqhubeka kweentengiso kunye nee-vPromotions zeziganeko, ukhuphiswano, kunye neelinders. Ngolwazi oluthe kratya, nceda undwendwele: www.vcreativeinc.com.
I-Matrix yenza ukuba imithombo yeendaba yenzeke ngokunceda iinkampani zemidiya ukwenza ngcono umxholo wazo. Imveliso yayo yeflegi, iMonarch, yeyona ndawo yentengiso yeentengiso yehlabathi eyakhelwe imithombo yeendaba-eguqula idatha ye-chaotic kulwazi lokuthengisa olunokuhambisa ulwazi olufunekayo ukuze kulindelwe, kulawulwe, kuhlolwe kwaye kuvalwe ishishini. Inkampani ilawula ngaphezulu kwe- $ 13 yezigidigidi kwimali yeentengiso zemithombo yeendaba, inikezela ngohlalutyo lwayo olusemagqabini, ubukrelekrele bokuthengisa, i-CRM ekhethekileyo kwimithombo yeendaba kunye nezixhobo zokuthengisa kubathengisi bemithombo yeendaba kwi-10,000 ukuphatha ngokufanelekileyo ukusebenza kwabo. Ngolwazi oluthe kratya, nceda undwendwele matrixformedia.com.
Izithuba ezandwendwe ngokukhawuleza (ndinibone nonke)
IMatrix kunye neWideOrbit Yandisa ubuhlakani ukuze kusebenze i-CRM Idatha yokuhamba kweNkampani zeMidiya ngokudityaniswa kwe-API eNtsha. - Septemba 25, 2019
I-Matrix kunye ne-vCreative Yongeza amandla okuhamba komsebenzi ngokudibeneyo - Septemba 24, 2019
UAdam Gotlieb ujoyina iMatrix njenge-CTO - Agasti 7, 2019
ukudityaniswa Mark Gorman Matrix Iplatifomu yokuthengisa intengiso yeMonarch Iintetho kunye nemisrya BuTeknoloji TVU Networks vCreative ndiphila	2019-09-24
Previous: Isinxibelelanisi / uMlawuli woFoto
next: Isandi se-Alchemy Post ukuxoxa ngoFoley we "Fosse / Verdon" yeFX kwi-NAB New York